နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့အား တွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့အား တွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့အား တွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: ဧပွီ 24, 2018 In: AppointmentNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့်စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Kim Hyun-chong ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့ကို ဆက်လက်တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားရေး၊ နည်းပညာ၊ အသိပညာမျှဝေရေးနှင့် စက်မှုဇုန်တည်ထောင်ရေး အလားအလာများစသည့် ရှိရင်းစွဲနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ဆောင် ရွက်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ
ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ ကုနျသှယျရေး၊ စကျမှုနှငျ့စှမျးအငျဝနျကွီးဌာန ကုနျသှယျရေးဝနျကွီးနှငျ့အဖှဲ့အား တှဆေုံ့
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ၊ ကုနျသှယျရေး၊ စကျမှုနှငျ့စှမျးအငျ ဝနျကွီးဌာန၊ ကုနျသှယျရေးဝနျကွီး H.E. Mr. Kim Hyun-chong ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ယနနေံ့နကျ ၉ နာရီတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ဌာန၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့စဉျ ကုနျသှယျရေးနှငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတို့ကို ဆကျလကျတိုးမွှငျ့ ဆောငျရှကျသှားရေး၊ နညျးပညာ၊ အသိပညာမြှဝေရေးနှငျ့ စကျမှုဇုနျတညျထောငျရေး အလားအလာမြားစသညျ့ ရှိရငျးစှဲနှဈနိုငျငံစီးပှားရေးဆိုငျရာ ဆကျဆံရေး တိုးမွှငျ့ဆောငျ ရှကျရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ စီးပှားရေးနှငျ့ ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာသနျးမွငျ့၊ အပွညျပွညျဆိုငျရာပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနမှ အမွဲတမျးအတှငျးဝနျနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
ကြေညာချက်အမှတ် – ၁/၀၄/၂၀၁၈ ဗဟိုအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
ဗဟိုပြန်​ကြား​ရေး​ကော်​မတီအစည်းအ​ဝေးမှ ​ရှေ့လုပ်​ငန်းစဉ်​များ ​ဆွေး​နွေးဆုံးဖြတ်